I-10 ye-Nautical Mile Mountain Cottage, eRanikhet -Igumbi-1 - I-Airbnb
I-10 ye-Nautical Mile Mountain Cottage, eRanikhet -Igumbi-1
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguPurnita
I-10, i-Nautical Mile - njengoko igama libonisa, le yi-Mountain Cottage ye-Mariner. Oku kwenziwe kukuthanda iintaba nomnqweno wokuthothisa isantya sobomi. Ilungele usapho kunye nexesha 'lam', eli likhaya elikude nekhaya; Igcinwe kwihlathi elishinyeneyo eliluhlaza 15km kude nedolophu yaseRanikhet e-Uttarakhand.
Ngomhla we-10, i-Nautical Mile Mountain Cottage ingaphaya kwesikhululo senduli esithandekayo saseRanikhet.
I-USP yale ndawo icocekile, umoya opholileyo wentaba kunye nokuba wedwa. Iimbono ezimangalisayo ze-Himalayan kunye nohlaza lunokonwatyiswa kwigumbi elipholileyo, kunye negadi kunye neGazebo yangasese enombono ongathintekiyo. Uluhlu olubanzi lwezinto eziluncedo zale mihla zenziwe ukuba zifumaneke ukuze uhlale ukhululekile kangangoko. Elakho ligumbi labucala kuMgangatho ophantsi.
Igumbi libanzi kwaye likhululekile, malunga neemitha ezingama-200 zendawo yabucala.
Sizinze kwihlathi elinguvimba kwaye siqhagamshelwe kakuhle kuhola wendlela. Kufuphi ngokwaneleyo kwiDolophu yaseRanikhet ukanti, kude lee ukuba wedwa unqwenela
Umbuki zindwendwe ngu- Purnita
Sikholelwa kunxibelelwano lobuqu neendwendwe; njengoko beya kunqwenelwa kwaye kunokwenzeka ngabo. Sisenokungabikho ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa siya kubeka iliso elibukhali ukuze siqinisekise ukuthuthuzeleka kwakho.
Eli likhaya lethu leholide ngoko ke asizukubakho ngalo lonke ixesha. Nangona kunjalo, umnakekeli wethu / umpheki uhlala ekwindawo kwaye uya kucoca kwaye apheke yonke imihla. Singakuvuyela ukukunceda wenze ukutya ngokwephalethi yakho, nangona iintlawulo ezinxulumeneyo (zihlale zifanelekile)
Sikholelwa kunxibelelwano lobuqu neendwendwe; njengoko beya kunqwenelwa kwaye kunokwenzeka ngabo. Sisenokungabikho ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa siya kubeka iliso elibukhali uku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ranikhet